Business & Economics » စိတ်နေသဘောထား (၁၆)မျိုး – Carjung	32
kai says: ဘိုလိုပါတော်တော်တတ်နေရမယ်…
စာကျက်ဦးမှ…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ဖတ်ရတာ ဗဟုသုတပွါး ပါတယ် ကင်းကောင်လေး ရေ။ :-))
Kaung Kin Pyar says: ဟုတ်တယ်.. အရီးပြောတာလဲ စဉ်းစားစရာပဲနော်…
ဇီဇီခင်ဇော် says: ပြန်လာမယ် ဟိ
Alinsett @ Maung Thura says: .ပြန်ဖတ်ရန်ပိုစ့်များဆိုတဲ့ ဖိုင်ထဲ ထည့်သိမ်းထားလိုက်ပြီ သပ်လား
Kaung Kin Pyar says: ပြန်ဖတ်ရင် ပိုစ့်တွေနဲ့တင် နိ ဖိသတ်လို့ရလောက်ပြီ… ။ နီ အကြွေးတွေ များနေပြီမဟုတ်လား…
Alinsett @ Maung Thura says: ဟုတ်ပါ့ ရွာမဝင်ဖြစ်တာ အတော်ကြာာာာာာ
ဇီဇီခင်ဇော် says: ရင်တွင်သိုဝှက်မထားပဲပွင့်လင်းသူ(Extroverted-E)
Kaung Kin Pyar says: ဟုတ်တယ်.. ။ မချွိက ESFP ပဲ…
Kaung Kin Pyar says: စာရှည်တွေ ဖတ်ပျင်းတာမယ် ကောင်းကင်ပြာရောပဲ ဒီလိုကြားက ဆုံးအောင် ဖတ်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ မမဝါးရေ…
Wow says: ဖျားစူး…
အိုက်လူစားဘီလို အကျင့်လဲ ဖတ်ပီး ဟုတ်သလို မဟုတ်သလိုဖစ်နေတုံး…. ကောမန့်တွေ ဖတ်လိုက်တော့ မယ်ချွိနဲ့ သွားတူနေပါရား … နာလည်း ESFP Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ဇီဇီခင်ဇော် says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: Notable ESFPs
Ma Ei says: ၁။ ISTJ အသွင်ပုံစံ
မြစပဲရိုး says: Notable ISTJs
Warren Buffett ပါမှတော့ မှန်သပေါ့။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: ကောင်းကင်ပြာ Accountant အဖြစ်နဲ့ ၅ နှစ်လောက်လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်..မအိရဲ့ ။ အိမ်ကရော အတူလုပ်တဲ့ အားလုံးက နှမြောစရာဆိုပြီး ၀ိုင်းတားတဲ့ ကြားက Career ပြောင်းခဲ့တာ…(Perceiving ကတော့ ပြေးမလွတ်ဘူး… )
တောင်ပေါ်သား says: ISTP လား ISFJ လား ထင်တာပဲ ၊ ISIS တော့ မဟုတ်ဘူး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: တခုခုတော့ တခုခု ဖြစ်မယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: Notable ISTPs
မြစပဲရိုး says: Mark Zuckerberg က INTJ ပါတဲ့။
တောင်ပေါ်သား says: ကင်းကောင်ဇာတ်ကားထဲက Naomi Watts ကိုကြိုက်သလို
မြစပဲရိုး says: ကျန်သေးတယ်။ နောက် တစ်မျိုး။
It’s meeeeeeeee. lol:-)))) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: အရီးရေ…
ဦးကြောင်ကြီး says: ကင်းကောင်သား ဆားခြင်လိုက်တာ…
Ma Ma says: တချို့လူ တချို့နေရာတွေမှာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတတ်ပြီး
ကိုယ်မှန်မယ်လို့ထင်တာကို လုပ်တာပဲ။ အဲဒါဆို ဘယ်လို သင်္ကေတဖြစ်မလဲ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4718
padonmar says: .E S F P
padonmar says: တကယ်လိုက်ဖတ်တော့ ISFP မှ ကိုယ်နဲ့ ကိုက်မယ်။ကိုယ့်ကိုကိုယ် E လို့ထင်တာ I ဖြစ်နေပါရော့လား။
pooch says: ESTJ ထင်တာပဲ ;p
ဦးကြောင်ကြီး says: DPNS
@QUIL@ says: တကယ်တော့ …၈မျိုးကို သွားပြီး အခြေခံလိုက်လို့ ၁၆မျိုး ဖြစ်သွားတာ..။
Kaung Kin Pyar says: It doesn’t matter how many resources you have. If you don’t know how to use them, it will never be enough.
Shwe Ei says: -ISTP လားမသိဝူး :P